Outlook Express Isixhobo sokulungisa. Outlook Express Lungisa isoftware.
DataNumen Outlook Express Repair kugqibelele Outlook Express isixhobo sokulungisa kunye nokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwihlabathi. Inokulungisa urhwaphilizo Outlook Express Iifayile ze-DBX kunye ne-MBX kunye nokufumana kwakhona ii-imeyile zakho kangangoko kunokwenzeka, ngaloo ndlela kuncitshiswa ilahleko kurhwaphilizo lwefayile.
Phawula: Nceda usebenzise DataNumen Outlook Repair ukubuyisa ii-imeyile kunye nezinye izinto kwiifayile ezikhohlakeleyo ze-Outlook PST.
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,455)
Ngoba DataNumen Outlook Express Repair?
Inqanaba lokubuyisela kwimeko yesiqhelo yimost Indlela ebalulekileyo ye Outlook Express imveliso yokufumana idatha. Ngokusekwe kuvavanyo lwethu olubanzi, DataNumen Outlook Express Repair unelona zinga lifanelekileyo lokuchacha, ibhetele kakhulu kunayo nayiphi na enye into okhuphisana nayo kwintengiso!
Funda ngakumbi malunga nendlela DataNumen Outlook Express Repair utshaya ukhuphiswano
Ukuguqulela ezizimeleyo kunye nophuhliso lwewebhusayithi
Okokugqibela-yimveliso eyenza oko ikuthethayo ngendlela ethe tye engenantsingiselo kunye nesiphumo esihle. Wenze kakuhle! Ndinqwenela ukuba bendikhe ndayifumana imveliso yakho ngaphambili
Ngombulelo bendinazo zonke iifayile ze-dbx kwi-back-up ukusuka nge-19th kaNovemba kwaye zonke ezinye zazikho
Sebenzisa ingxelo yedemo ye-DOER -
Ndithengile DataNumen Outlook Express Repair kwaye ndibuyise ngempumelelo iifayile kwifolda yam ethe ngandlela ithile yanyamalala kuluhlu lwam lwe-OE. Eyakho
UArthur J Wehlow
Isisombululo seMphathi Express Express
Ngaphandle kwezinye izinto ezincinci,
Ndine lost Ii-imeyile ezibalulekileyo ngexesha lenkqubo yokubumbana kwaye ndingazi ukuba sizifumana njani okanye sizivule kwakhona. Imveliso yakho isombulule ukukhutshwa
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen Outlook Express Repair v2.5
Inkxaso yokufumana kwakhona Outlook Express Iifayile ezi-4 mbx kunye Outlook Express Iifayile ze-5/6 dbx.
Inkxaso yokufumana kwakhona iifayile ze-dbx kunye neefayile ze-mbx kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, efana neefloppy disks, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokulungisa ibhetshi yeefayile ze-dbx kunye neefayile ze-mbx.
Inkxaso yokulungisa iifayile ze-dbx kunye ne-mbx ukuya kuthi ga kwi-4GB, ke inokulungisa iifayile ze-dbx ngengxaki ye-2GB.
Inkxaso yokufumana kwakhona ii-imeyile.
Inkxaso yokufumana kwakhona Outlook Express idatha evela kwitemporary .dbt iifayile.
Inkxaso yokufumana nokukhetha iifayile ze-dbx okanye ze-mbx eziza kulungiswa kwikhompyuter yendawo.
Ukudityaniswa kwenkxaso kunye neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa ifayile ye-dbx kunye nemenyu yokuma yeWindows Explorer ngokulula.
Umgca wenkxaso yomyalelo (i-DOS prompt) iiparameter, ngoko unokucela i-DOER kwinkqubo yakho.
usebenzisa DataNumen Outlook Express Repair Ukufumana kwakhona Outlook Express Iimeyili
Outlook Express igcina zonke ii-imeyile kwiifayile ze-.dbx. Umzekelo, ifayile ye- Inbox.dbx iqulethe ii-imeyile kwi-Inbox, i-Outbox.dbx file enee-imeyile kwi-Outbox, njalo njalo.
Ukuba ifayile ye .dbx yonakele kwaye awukwazi ukufikelela kwii-imeyile ezikuyo, ungasebenzisa DataNumen Outlook Express Repair ukufumana ii-imeyile zakho kuyo. Ii-imeyile ezifunyenweyo zigcinwa njengeefayile zeemem ezinokungeniswa ngokulula kwakhona Outlook Express.
Fumana ifayile ye-dbx okanye i-.mbx eyonakeleyo ukulungiswa ukuba awukwenzi oko.
Phawula: Ngaphambi kokulungisa ifayile ye-dbx okanye mbx eyonakeleyo nge DataNumen Outlook Express Repair, ndicela uvale Outlook Express kunye nezinye iinkqubo ezinokuthi ziguqule ifayile.
Khetha ifayile ye-dbx eyonakeleyo okanye ye-mbx eza kulungiswa:
Ungafaka i-dbx okanye igama lefayile mbx ngokuthe ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile. Unokucofa kwakhona iqhosha lokufumana ifayile ye-dbx okanye ye-mbx eza kulungiswa kwikhompyuter yendawo.
Ngokuzenzekela, DataNumen Outlook Express Repair iya kukhupha yonke imiyalezo efunyenweyo kulawulo lwe-xxxx_recovered, apho i-xxxx ligama lefayile eyonakeleyo ye-dbx okanye ye-mbx. Umzekelo, kwifayile ye-Inbox.dbx, isikhombisi esingagqibekanga siya kuba yi-Inbox_recovered Ukuba ufuna ukusebenzisa esinye isikhombisi, nceda ukhethe ngokufanelekileyo:
Ungafaka igama lesikhombisi ngokuthe ngqo okanye ucofe i ukukhangela kwaye ukhethe isikhombisi.
nqakraza iqhosha, DataNumen Outlook Express Repair Ndiza start Ukufumana kwakhona ii-imeyile kwifayile eyonakeleyo ye-dbx okanye ye-mbx. Inkqubela phambili bar
Emva kwenkqubo yokulungisa, ukuba kukho nayiphi na imiyalezo efunyenwe kwifayile ye-dbx okanye ye-mbx ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yomyalezo ngolu hlobo:
Ngoku ungavula umyalezo ofunyenweyo nge Outlook Express ngokunqakraza kabini ifayile ye I-icon yefayile ye .eml kulawulo lwemveliso. Okanye ngenisa imiyalezo emininzi kwifolda yeposi kwi Outlook Express.
DataNumen Outlook Express Repair 2.5 ikhutshwa nge-24 kaDisemba, 2020
DataNumen Outlook Express Repair 2.3 ikhutshwa nge-9 kaNovemba ngo-2020
DataNumen Outlook Express Repair 2.2 ikhutshwa nge-28 Septemba 2013
DataNumen Outlook Express Repair 2.1 ikhutshwa ngoJulayi 7, 2009
Ukuphucula ukusebenza kwe-injini yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kakhulu.
Ukuphucula ukuhambelana kwe-GUI kwizisombululo ezahlukeneyo kunye neenkqubo zokusebenza.
DataNumen Outlook Express Repair 2.0 ikhutshwa ngoJanuwari 29, 2009
Uyile kwakhona i-GUI.
DataNumen Outlook Express Repair 1.5 ikhutshwa nge-6 kaDisemba ngo-2006